iPod Touch Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado iPod Khasaaray Photos, Movies, iwm
iPod-kabashada taabto: Sidee inuu ka soo kabsado iPod Khasaaray Movies
> Resource > iPod > iPod Recovery taabto: Sidee inuu ka soo kabsado iPod Khasaaray Movies
Luma aad iPod taabto, ama la tirtiro files aad iPod taabto si qalad ah? Waxba ma ahan wixii aad ku samaysay inuu idin khasaaro xogta, waxaa jira 2 siyaabo inuu ka soo kabsado files ka iPod taabto, oo ay ku jiraan sawirrada, videos, qoraalo, jadwalka iyo xiriirada: kabsado aad Lugood gurmad file ama si toos ah uga iPod Touch soo kabsado.
Sida loo sameeyo dib u soo kabashada iPod taabashada
Waxaad ka heli kartaa gurmad Lugood ee file on your computer, laakiin waa unaccessible iyo dhaqaajin karo. Waa nooc ka mid ah qaab .db. Si aad u isticmaasho, waxaad u baahan tahay barnaamij-saddexaad: iPod Touch software soo kabashada, oo ha kartaa in aad soo saaro content ka file gurmad ah.
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows) waa iPod kabashada xogta xiriiri dhinac saddexaad ah. Waxaa aad u saamaxaaya in ay ku eegaan ku jira oo dhan ka gurmad iyo kabsado iyaga eegista, oo ay ku jiraan sawirrada, videos, qoraalo, jadwalka iyo xiriirada. Waa maxay dheeraad ah, labada barnaamijyada taageeraan dib u soo kabashada oo dhan iPads, iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS iyo nuquladii hore. Wondershare Dr.Fone Ee macruufka Oo weliba, kuu ogolaanaysaa inaad si toos ah iskaan ceshan xogta ka iPod xiriiri 5/4.
Download version maxkamad free hoose si aad u leeyihiin isku day ah.
Hadda, bal aynu hubiso faahfaahinta soo kabashada iyada oo la isticmaalayo Wondershare Dr.Fone (Mac). Dadka isticmaala Windows, tallaabooyinka la mid yihiin.
Tallaabada 1. Warbixiinta xiriiri iPod faylka gurmad
Marka lauching this iPod kabashada xogta la taabto, ma xidhi aad iPod xiriiri Lugood, si looga hortago in xogta lumay ka overwritten. File gurmad ayaa la cusbooneysiin doonaa ka dib markii syncing qalab. Halkan waxaan isku dayi leh "Recovery ka Lugood gurmad file" ka mode. Markaas dooro file raad raac ah oo aad iPod taabashada iyo sii wadaan in ay "Start Scan" iyo Macdan jira.
Tallaabada 2. Ladnaansho xogta xiriiri iPod
Ka dib markii ay ka kooban laga soo saaro, aad ku eegaan karo oo dhan oo iyaga ka hor dib u soo kabashada, si loo hubiyo tayada, sida sawiro, videos, jadwalka taariikhda, xiriirada iyo qoraallada la soo kaydsan aad iPod taabto. Guji "Ladnaansho" in ay iyaga oo dhan retieve.
Si looga fogaado mar kale ka iPod xiriiri badiyay xogta, ha soo xusuusto in ay gurmad on your computer si fiican.
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray iPad Photos, Notes, Videos, Xiriirada & Calendar
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka iPhone
TunesGo siidaysay aad music, samaynayaan wixii Lugood ma sheegi karo.
Hab fudud Abaabulaan Music on iPod
Sida loo saar Music on iPod aan tirtiro Wax
Ka iPod Bedelka Music New Computer Si fudud
Sidee inuu ka soo kabsado Songs ka iPod Classic
2 Siyaabaha la wadaag music iPod
Notes xiriiri iPod Soo Celinta: Sida loo Soo Celinta Notes on iPod xiriiri 4
Jidka Quick inuu ka soo kabsado ka hor inta Data Unlock iPod xiriiri 4
Sida loo Delete Songs ka classic iPod
Sida loo Download BBC Radio si iPod via Lugood
Sida loo sameeyo iPod Muqaal iyo Watch Muqaal on iPod